Boqortooyada Sacuudiga oo dalkeeda ka eriday safiirka Canada una yeeratay safiirkeeda Canada ka fadhiya
arlaadi August 6, 2018 1 Comment
Wasaarada arimaha dibada Sacuudiga ayaa u qabatay 24 saac inuu safiirka Canada uga baxo dalka Sacuudiga sidoo kalena u yeeratay safiirkii ka fadhiyay boqortooyada magaalada Ottawa ee dalka Canada.
Isku dhacaan diblomaasiyadeed ayaa yimid kadib markii ay dowlada Canada cadaadis ku saartay dalka Sacuudiga inuu sii daayo shaqsiyaad Sacuudiyiin ah oo u ol’olaleeya bulshada kuwaasoo dembiyo loo haysto.
Sida ay qortay wakaalada wararka u faafisa Sacuudiga ayaa ay sidoo kale dowlada Sacuudiga joojisay dhamaan wixii maalgashi iyo heshiisyo ganacsi ee ka dhexeeyay labada dal.
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaarada arimaha dibada Sacuudiga ayaa waxaa ka mid ahaa waxa ku qornaa, ” Waaa faragelin qayaxan oo lagu sameynayo arimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa ayna liddi ku tahay xeerarka aasaasiga ee caalamiga iyo dhamaan shuruucda haga xiriirada u dhexeeya dalalka”
” Taariikhdeeda dheer, Sacuudiga ma aqbalin mana aqbali doonto faragelin lagu sameeyo arimaheeda gudaha ama in lagusoo rogo waxyaabo loogasoo yeeriyay dal kale” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee kasoo baxay Sacuudiga.
Sanadkii 2014tii ayaa ay shirkad laga leeyay dalka Canada ku guuleysatay khandaraas ay bixisay dowlada Sacuudiga kaasoo gaadiidka fudud loogu sameynayay ciidamada Sacuudiga waxaana khandaraaskaas ku baxayay $ 13 bilyan, toban iyo saddex bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxa ayna dowlada Canada ku tilmaantay heshiiskii ugu ballaarnaa ee ay ebid Canada la gashay dal kale intii ay jirtay taariikhda dalkaas.
Dowlada Somalia ay kudegdektay In ay dhinaca Saudiga soo maran hadii la isu barbar dhigi Canada , sacuudiga waa xaqiir, oo muslimiinta u roonayn, wadamada muslimiinta burburiyay, maxaa lagu doorta .